तपाईंको उत्तरदायीताको अभावले तपाईंको सामाजिक मिडिया रणनीतिलाई नष्ट गरिरहेको छ Martech Zone
सोमवार, जुन 9, 2014 आइतबार, जुन 8, 2014 Douglas Karr
मा मान्छे ईंटफिश, एक फर्म जसले उनीहरूको सामाजिक, मोबाइल र डिजिटल रणनीतिहरूको साथ प्रमुख ब्रान्डहरूलाई मद्दत गर्दछ यस इन्फोग्राफिकलाई सँगै राख्यो जुन सामाजिक मिडियामा विशाल मुद्दाको अन्तरदृष्टि प्रदान गर्दछ। धेरै ब्रान्डहरु सोच्छन कि उनिहरु ने सोशल मीडिया मा उच्च ग्राहक सेवा प्रदान गर्छन् तर वास्तविकता त्यो छ Consumers २% उपभोक्ता असहमत छन्!
आउच हामीले यो पहिले नै भनिसकेका छौं तर धेरै कम्पनीहरूले मार्केटिंगका लागि सोशल मिडिया प्रयोग गर्ने निर्णय गर्छन् र ग्राहक सेवा प्रक्रिया विकसित भएको छैन। तपाईंको सामाजिक मिडिया योजना कत्ति ठूलो छ भन्ने कुराले फरक पार्दैन जब तपाईंको ग्राहकहरूले उनीहरूको समस्याहरूको ख्याल गर्दा तपाईंको जवाफदेहीताको अभावको बारेमा मुखर हुन थाल्छ। कुनै मार्केटिंग रणनीति जुन तपाईंले सोच्नुहुनेछ अहिले बर्बाद भएको छ किनकी दर्शकहरूले तपाईंको ग्राहक सेवा मात्र देखिरहेका छन् बेकार.
हो, उल्टो पनि सहि छ। कम्पनीहरू जो उत्तरदायी छन् र काम पाउँदछन् उनीहरूको अनलाइन ग्राहकहरूको प्रशंसा बढाउन सक्षम छन्। तपाईको लागी कुन एक ले तपाइँको अधिग्रहण प्रयासमा असर पार्नेछ?
टैग: ब्रान्डहरुईंटफिशप्रतिक्रिया समयप्रतिक्रियासामाजिक ग्राहक सेवासामाजिक संजालसामाजिक मिडिया प्रतिक्रिया
जुन २,, २०१ बिहान :10:२२ बिहान
उत्कृष्ट पोस्ट डग !! बाडेको मा धन्यवाद!